Telefishinka SVT oo doonaya in Quranka si casri ah loo fasiro | Somaliska
Barnaamijka ka baxa telefishinka Sweden ee SVT kaasoo lagu magacaabo Uppdrag Granskning ayaa sanadkii hore basaasid ku sameeyay masaajida ugu waaweyn Sweden. Basaaskii ayaa lagu soo bandhigay in imaamyada ka hawl gala masaajida ay haystaan fikrado lagu sheegay kuwo qadiimi ah sida in ninku xaaskiisa garaaci karo, in uu 4 dumar ah guursan karo, iwm.
Hadaba barnaamijkaas ka dib ayaa dood dheer waxay ka dhex abuurantahay Muslimiinta Sweden, iyadoo masaajida qaarkood ay shaqada ka cayriyeen raggii bixiyay fikradaha aan kor ku soo sheegay iyagoo lagu eedeeyay in aysan tixgalin sharciga wadanka Sweden iyo dhaqanka wadanka aan ku noolnahay.
Intaas loogama harin ee barnaamijka Uppdrag Granskning ayaa markale ku laabtay masaajidii, iyadoo xalay lagu soo bandhigay qeyb kale oo loogu magacdaray “Kampen om Koranen” kaasoo lagu fasiri karo “Dagaalka Quraanka”. Sababta ay sidaas ugu magacaabeen ayay ku sheegeen in Muslimiinta ay labo u kala qeyb sameen kuwo ku dhagan fikirkii hore iyo kuwo aaminsan in la raaco sharciga Sweden isla markaana aysan xiliga hada la joogo wanaagsanayn in lagu dhaqmo Xaas garaacid iyo dumar badan guursi.
Masaajida dib loo booqday ayaa barnaamijka lagu sheegay in Masjidka Stockholm uu sameeyay isbedalka ugu balaaran iyadoo durbadiiba la cayriyay imaamkii horay ula kulmay barnaamijka. Balse barnaamijka waxaa lagu sheegay in fikradihii aysan isbedalin.
Masaajidka Örebro ayaa sidoo kale shaqada ka cayriyay imaamkii hore. Masaajidka Göteborg ayaa la sheegay in uusan wax isbedal ah samayn. Barnaamijka ayaa markii aan u guur galay waxay iila muuqdaan kuwo laftoodu weerar ku ah Quraanka, iyagoo doonaya in imaamyada ay la kulmayaan ay fasiraad bedalin u soo bandhigaan ummada. Arintaas ayaa waxaa ka jawaabay imaam ka hawl gala Örebro Moske.
“Islaamku waa ogolyahay in ninku 4 dumar ah guursado. Arintaas mid aan wax ka badali karno ma ahan. Cid xaq u leh in ay wax ka badasho ma jidho. Laakiin dadkeena ku nool wadamada kale, sida Sweden waxaa na qabanaya sharciga wadankaan. Marka Islaamku waa ogolyahay 4 dumar ah, balse Sweden lagama ogola. waa sidaas ” ayuu yiri Aisar Alshawabkeh oo kal hawl gala Örebro Moské
Masaajidka Göteborg ayaa ku dhawaaqday in ay booliska ku dacweyn doonaan telefishinka SVT iyagoo sheegay in hadalkii laga duubay imaamkooda jaritaan lagu sameeyay oo intii xumaanta loo arkayo oo keliya la soo bandhigay.
Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka ayaa soo bandhigay in uu jiro qilaaf weyn uu ka dhex taagan Muslimiinta marka laga hadlayo fasiraada Quraanka. Barnaamijkaan ayaa ah mid aan u wanaagsanayn magaca Muslimiinta iyo diinta Islaamka.
Asc Dhammaan umada muslimka ah ee kutaxan pajekaan qaasatan soomaalida, xalay waan fiirsanaayy barnaamijkaas runtii aadbaan uga xumaaday waxa meesha kasocday. Waxa ay raadinayaana ayaa ah wax raacsan fikirkooda iyo inay dadka afka ugaliyaaan wax aan jirin qaasatan waxa layaabay dumarka ay su aalaha weydiinayeeb inaysanba diinba wax laga weydiin karin, layaabka ayaa ah oo ah inayba moodaan Quraanka wax sida larabo laga yeeli karo, tan ugu daranna ayaa ah oo ah wax laga yaqyaqsado inay culimo isku sheeg ay ay u hadlaan sidii mufti iyo ayagoo ogaynba waxa uuyahay barnaamijkaan. Tankale ayaa ah inayba doonayaan in qofkaste Sweden ah oo lashaqeeya Sidii islaamku uheli lahaa taagerada dowlada ay ku abuuraan fikrad qaldan.
Waxa wax lagu qoslo ah STV in uu diyaarinayo imaamyada inay udiraan jaamacad macnaheedu yahay inay helaan dad diinta sida ayagu rabaan ufasira , taana in laga foojignaado ayaa loobahanyahay.
Wax walba oo ay sameeyaan uma suura galidoonto inay badalaan Quraanka waayo Rabi subxaanuhu watacaalaa baa yairi (((((( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )))) ((((Anaga ayaynu soo dajinaya Quraanka anagaynu xifideyno))))
WAXAA WEYN XUMAANTA KA SOO BAXEYSA AFKOODA WAXA AY LAABTOODU QARINAYSO AYAASE KA BADAN.
WAXASE YAAB LEH DADKA ISLAAMNIMO SHEEGANAYA EE KU RAALI GELINAYA IN QUR AANKA MUQADASKA AH SIDII LA RABO LOO DHIGI KARO.
Sxb waqaa qaldantay diinta iyo Islaamka wax wax u dhibi kara ma jiraan, ee adiga ha qaldamin,
Wax kasta oo gaalo ay u soo maleegto islaamka waa mid guul daraysanaya waxaana mar walba oo ay islaamka dacaayado xun iyo ceeb la doonaan dhacda inuu ilaahay dad badan oo aan islaamka waxba ka ogayn uu eebe ku soo hanuuniyo marka ay isku dayaan bal inay wax ka ogaadaan waxa islaamka lagu sheegayo ee beent iyo boorabagandhaha waxayna helaan xaqa marka ay akhriyaan Quraanka kariimka ah iyo diinteena suuban ee islaamka
Asc bahda wargeyska Somaliska waa ay fiicantahay in aad wax walba shacabka usoo bandhigtaan laakin qoraalkiinu ha ahaado mid la aqrinkaro oo markaat wax qortaan dib ugu noqda si aad qaladaadka uga saar taan.
Tusaala ahaan fiiri qormada qeybta 2aad. marka uu qoraagu leeyahay fikradaha aan kor ku soo sheegay. Waxa aad moodaa qoraal shaqsi ah ee uma eka mit shabakad ay leedahay.
kolaya xalay waanu wada fiirsanay inta badan barnaamijka lakin waxaa modaa inuu fekerka naga qaldan yahay ,,,waxaan taas u leyahay, aqoonti iyo fahanki ayaa isga kayana darsan …waayo dawlada swedan waxa aan anga usheeganay ayay noosoo dayeen qofki fiirsanaday barnaamijyadan kiisi u horeyay waxaa laga duubay imamyo masijid hadana waa la cayriyay ayaa la leyahay…. waxaan rabaa inan fikirkayag ku gaabiyo swedan waxba nagam halaynin diintana uma gaysnin laakin angaa aqoonta nagu yartahay,,, kuwa culimada shegnayayo ayaaa kala madhab haysto qaar waa shaafic,, qaarkale xanbal..kuwana labada kalay xogaa kasoo barteen lakin ,,sunaha iyo quraanka waa lama tabtaan ,,,,ogaada halka ayad eee wesa qaadka looga hadalay inay culimda 14 melod isaga qilaafsan tahay ,,akhwaanii diinta halabarto ,, runtana halga sheego …afka carabiga iyo naxwaha saxda ahn hala marto…..waxba yanan lagu marmasiyoon galada nabigaba waan ognahay waxa sookala maray hadan waa uula macaamalijirya xaga nolosha ijtimaaciga ,,, hadad waxba aqanin oo aad kudagalaysaa 4 lama guursan karo bal kawarama mas -alooyinka qaar maxaa ka yeelilahaydeen -WABILAAHI TOWFIIQ
aniga waxaan ka caraysanahay culimada ilaahay kitaabkiisa beenta ka sheegaya, jimcaale walale diinta iyo quraanka tafsiirkiisa culimadu iskuma haysato ee waxaa jira niman ka baqaya in sharica wadanka laga qaado oo diintii ku ciyaaray ilaahay ku been abuurtay, kuwaasna aakhiro ayaa sugaysa.
in ninka afarxaas islaamku u baneeyey xataa cidkasta ayaa og oo aduunku ku nool maxay u qarinayaan oo u leeyihiin islaamku ma ogola may iska dhahaan diinta ayaa ogol laakiinse idiku diida hadaad rabtaan, horta waa yaabe nimankaan beenta sheegay ma waxaa la waydiiyey waxa diintiisu qabto mise waxaa la waydiiyey waxa sharciga sweden qabo. ayaga diin ayaa la waydiiyaye may sida runta ah uga jwaabaan
asc walalayal waan idin salamey meelkasto duunida aad ka joogtan walalyal horta ilaah kitaabkisa wuxu ku shegey in ey nimanka 4 guursan karan, lakin nimanka qaar wax baa ka khaaldan khaar aya dhah xaaskeyga weysada weey igaa jibinee nin iyo naag iskhaba seey weysada iskaga jibinayan, walalayal marka diintena yaan khalad laga shegin, waabilaahi towfikh asc
ASSALAMU ALIKUM WAA RAXMATUALLAHI WAA BARAKATUH SVT WAAY KHALDANTAHY SLUTA ÖVERDRIVA ISLAM ÄR BÄST.
iska ilaali in aad ku dhiirato hadalo diinta ku ah gaf wadankaan qaynuunka u dagsan waxaa ka wayn shareecada islamka iyaga haday diidaan iyaga ayay utaal lkn waa loo sheegaa shareecada ayaa sidaas qabto mar walba isku day inaad allah raali gilisaa ini aad raali gili lahayd sweden waayo c
I am muslim and i am so happy because i am muslim
Diinta islamka waxay qabata qofka xaaskiisa in uu waaniyo hadii waansami wayso in uu firaashka ama gogasha ka fogado hadii ay waansami wayso in markaas uu wax yar oo dhibayn uu ku dhufto si uu umuujiyo in ay qalad kusugantahay mida kale afar Xaas waxaa loo ogalyahay ninka u cadaalad fali kara oo simi kara xaqooda hadii kale diinta ma ogala nabigeena muxamed nmkh wuxuu yiri ninkii guursada laba Xaas oo u cadaalad fali waaya aaqiro wuxuu imana asaga oo kala raaraca ama garbihiisa anu sinnayn
asalamu calaukum kuwa dhuni raaca ah ee diinta beenta ka sheego ayaa u sabab inay gaalo ku dhiradan inay dintanada gara gashtan oo ayba iskudayaan inay xukunka allaah weeraran marka muslimka waxa lagu yaqaan qof sareeyo ee imamyadan masakinta ah yanan daba farisan ee ddintena an run kasheegno allaah ayaa 4 nobaneeyay iyaga oo foofarka cunan kama hadli karan